1. Chii chinonzi epoxy granite?
Epoxy granite, inozivikanwawo seyakagadzirwa girenayiti, musanganiswa we epoxy uye granite inowanzo shandiswa seimwe nzira yezvinhu zvemuchina turu zvigadziko. Epoxy granite inoshandiswa pachinzvimbo chekukanda simbi uye simbi yeiri nani vibration damping, yakareba turu hupenyu, uye yakaderera gungano mutengo.
Machine chishandiso chigadziko
Mashini emuchina uye mamwe epamusorosoro-akaomarara michina inotsamira pakuomarara kwakasimba, kugadzikana-kwenguva refu, uye hunhu hwekunyorovesa hunhu hwezvinhu zvepasi zvekuita kwavo kwakasimba uye kwakasimba. Zvishandiso zvinonyanyo shandiswa zvezvivakwa izvi zvakakandwa simbi, welded simbi nhema, uye yakasikwa granite. Nekuda kwekushomeka kwekureba-kwenguva kugadzikana uye kwakashata kwazvo kudzikisira zvivakwa, simbi dzakagadzirwa zvivakwa hazviwanzo kushandiswa panodiwa zvakakwana. Yakanaka-mhando simbi yakakosheswa-yakasununguka uye yakasungirirwa ichapa chimiro chimiro chakasimba, uye inogona kukandirwa mumhando dzakaomarara, asi inoda nzira inodhura yekugadzira michina kuumba huso hwakaringana mushure mekukanda.
Yakanaka-mhando yakasikwa girenayiti iri kuramba ichiwedzera kuoma kuwana, asi iine hunyanzvi hwekunyorova kupfuura simbi yakakandwa. Zvekare, senge nesimbi yakakandwa, kugadzirwa kwechero girenayiti ibasa-rinotyisa uye rinodhura.
Precision granite castings inogadzirwa nekusanganisa granite aggregates (ayo akapwanywa, akagezwa, uye akaomeswa) ne epoxy resin system patembiricha yekunze (kureva, kutonhora kurapa maitiro). Quartz aggregate filler inogona zvakare kushandiswa mukuumbwa. Vibratory compaction panguva Kuumbwa muitiro zvakasimba kurongedza uwandu hwezvinhu zvabatanidzwa pamwechete.
Threaded inoisa, mahwendefa esimbi, uye mapaipi anotonhorera anogona kukandwa-mukati panguva yekukanda. Kuti uwane chinhanho chakakwirisa chekuita zvakasiyana-siyana, njanji dzakatsetseka, nzira dzemasiraidhi-nzira uye mota dzinokwenenzverwa dzinogona kudzokororwa kana kugadzirwa-mukati, nekudaro kubvisa kudiwa kwechero post-cast machining. Kumeso kupera kwekukanda kwakanakisa sevhu pamusoro.
■ Kudengenyeka kunyura.
■ Kugadzikana: tsika zvine mutsetse nzira, e hydraulic fluid matangi, akapinza akapetwa, kucheka mvura, uye mugero wepombi zvese zvinogona kubatanidzwa mune yepolymer base.
■ Kubatanidzwa kwekuisa nezvimwe zvinobvumira kuderedzwa kwakanyanya kwemishini yekupedza kukanda.
■ Nguva yeGungano inoderedzwa nekubatanidza zvinhu zvakawanda mukukanda kamwe chete.
■ Haidi yunifomu yemadziro ukobvu, ichibvumira kune yakakura dhizaini kuchinjika kwechigadziko chako.
Chemical Kemikari inoshingirira pazvinyungudutsa zvakajairika, acids, alkalis, nekucheka zvinwiwa.
■ Hazvidi kupenda.
■ Chidimbu chine uvha hwakada kufanana nealuminium (asi zvidimbu zvakakora kuti uwane simba rakaenzana).
■ Iyo yakasanganiswa polymer kongiri kukanda maitiro anoshandisa mashoma mashoma simba pane esimbi castings. Polymer cast resin inoshandisa mashoma simba kugadzira, uye iyo yekukanda inoitwa mukamuri tembiricha.
Epoxy granite zvinhu zvine zvemukati damping chinhu kusvika kakapetwa kagumi pane yakakanda simbi, kusvika katatu zvakapetwa kupfuura yakasikwa granite, uye kusvika makumi matatu zvakapetwa kupfuura simbi yakarongedzwa chimiro. Iyo haina kukanganiswa neanotonhorera, ine yakanakisa kwenguva-refu kugadzikana, yakagadziridzwa tembiricha kugadzikana, yakakwira torsional uye yakasimba kuomarara, yakanakisa ruzha kupinza, uye isina basa mukati mekunetseka.
Zvakaipira zvinosanganisira kuderera kwesimba muzvikamu zvidiki (zvisingasviki 1 mu (25 mm)), simba rakadzika rekupokana, uye kushomeka kwekushomeka.
Nemazvo Granite Kufanana, Nemazvo Granite, Epoxy Concrete, Nemazvo Granite Surface Plate, Nemazvo Granite Cube, Precision Granite Square Mutongi,